I-AOI - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-AOI iyinqubo ebaluleke kakhulu ye-QC yokuhlola ikhwalithi yokufaka i-SMT.
IFumax inokulawula okuqinile ku-AOI. WONKE amabhodi ayi-100% ahlolwa ngumshini we-AOI kulayini weFumax SMT.
I-AOI, enegama eligcwele le-Automated Optical Inspection, iyithuluzi esilisebenzisayo ukuthola amabhodi wesekethe esihlinzeka amakhasimende ngekhwalithi ephezulu.
Njengobuchwepheshe obusha bokuhlola obusafufusa, i-AOI ithola ikakhulu ukukhubazeka okuvamile okuhlangatshezwane nakho ekushayeni nasekuhlanganiseni ngokususelwa kubuchwepheshe bokucubungula okubukwayo obushesha kakhulu futhi obunemba kakhulu. Umsebenzi womshini ukuskena i-PCB ngokuzenzekelayo ngekhamera, uqoqe izithombe bese uqhathanisa nemingcele ku-database. Ngemuva kokucutshungulwa kwesithombe, kuzomaka amaphutha ahloliwe futhi kuboniswe kumonitha ukuze kulungiswe ngesandla.
Yini okufanele itholwe?
1. Uyisebenzisa nini i-AOI?
Ukusetshenziswa kwasekuqaleni kwe-AOI kungagwema ukuthumela amabhodi amabi ezigabeni zomhlangano ezalandela, kufinyelelwe ukulawulwa okuhle kwenqubo. Okunciphisa izindleko zokulungisa, futhi kugweme ukusula amabhodi wesifunda angalungiseki.
Ukubeka i-AOI njengesinyathelo sokugcina, singathola wonke amaphutha womhlangano njengokuphrinta kwe-solder, ukufakwa kwezinto, nezinqubo zokuvuselela, okunikeza ukuphepha okuphezulu.
2. Yini okufanele itholwe?
Zintathu ubukhulu ikakhulukazi:
Ukuqapha kuzotshela abasebenzi bezondlo uma ibhodi lilungile bese limaka lapho kufanele lilungiswe khona.
3. Kungani sikhetha i-AOI?
Uma kuqhathaniswa nokuhlolwa okubukwayo, i-AOI ithuthukisa ukutholwa kwephutha, ikakhulukazi kulawo ma-PCB anzima kakhulu kanye namavolumu amakhulu okukhiqiza.
（1, indawo eqondile: encane njenge-01005.
（2, Izindleko eziphansi: Ukwenza ngcono izinga lokudlula le-PCB.
Objects 3, Izinto eziningi zokuhlola: Kubandakanya kepha kungakhawulelwe kusekethe elifushane, isekethe eliphukile, i-solder enganele, njll.
（4 lighting Ukukhanyisa okuhleliwe: Khulisa ukuncipha kwesithombe.
Software 5 software Isoftware enekhono lenethiwekhi: Ukuqoqwa kwedatha nokubuyiswa ngombhalo, isithombe, i-database noma inhlanganisela yamafomethi amaningi.
Feedback 6 feedback Impendulo ephumelelayo: Njengesethenjwa sokuguqulwa kwepharamitha ngaphambi kokukhiqiza noma kwenhlangano elandelayo.
4. Umehluko phakathi kwe-ICT ne-AOI?
（1） ICT ithembele kuzici zikagesi zezinto zikagesi zesekethe ukuzihlola. Izici zomzimba zezinto ze-elekthronikhi nebhodi lesifunda zitholwa yimvamisa yamanje, i-voltage, kanye ne-waveform frequency.
（2） I-AOI iyidivayisi ethola ukukhubazeka okuvamile okuhlangatshezwane nakho ekukhiqizeni nge-soldering ngokuya ngesimiso se-optical. Imidwebo yokubukeka kwezingxenye zebhodi lesifunda ihlolwa ngokufanele. Isifunda esifushane sahlulelwa.
5. Amandla: 3 Amasethi
Ukufingqa, i-AOI ingahlola ikhwalithi yamabhodi aphuma ekugcineni kukalayini wokukhiqiza. Idlala indima esebenzayo nenembile ekuhloleni izinto zikagesi kanye ne-PCB ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo inekhwalithi ephezulu ngaphandle kokuthinta umugqa wokukhiqiza nokwehluleka kokukhiqiza kwe-PCB.